🥇 ▷ Huawei P Smart + rasmi ah: wuxuu si gaar ah ugu yahay Amazon taleefonka casriga ah ee leh Kirin 710 ee Talyaaniga (la cusbooneysiiyay) ✅
Huawei P Smart + rasmi ah: wuxuu si gaar ah ugu yahay Amazon taleefonka casriga ah ee leh Kirin 710 ee Talyaaniga (la cusbooneysiiyay)
GALMUDUG LA’AAN KU SAABSAN HUAWEI P SMART +
P Smart + waxaa si gaar ah looga heli doonaa Amazon.it khibrad wax soo iibsasho oo casri ah oo firfircoon
Milan, 18 Luulyo 2018 – Huawei, oo ah hogaamiyaha adduunka ee teknolojiyada, ayaa maanta furaya HUAWEI P smart+, aalad loogu talagalay inay kaafiso baahiyaha macaamiisha aadka u dalbanaya, kuna bixisa tikniyoolajiyada ugu wanaagsan, ruux hal abuur leh iyo naqshad qurux badan oo qiimo jaban lagu heli karo.
Soosaarida taleefanka casriga ee cusub, Huawei wuxuu doortay inuu si iskaashi leh ula shaqeeyo Amazon.it, Go’aan ka tarjumaya nafta caqliga iyo firfircoon ee aaladda iyo baahiyaha macaamiisha ee sii kordheysa u leexanaya khadka tooska ah ee waayo-aragnimada dukaamaysiga dhaqsaha badan oo gacan qabta.
Markii ugu horeysay Huawei wuxuu doortaa inuu ku tiirsanaado hal kanaal oo iib ah: P smart + waxaa dhab ahaan lagu iibsan doonaa si keli ah, muddo xaddidan, oo ah dukaanka qadka internetka ee ‘Amazon.it’. Isticmaalayaasha doorta inay horay u dalbadaan aaladda, laga bilaabo maanta illaa 7da Agoosto, waxay sidoo kale awoodi doonaan inay ku raaxaystaan ​​dalab gaar ah oo loogu talagay.
HUAWEI P smart + waa casriga loogu talagalay dhalinyarada, firfircoonida iyo jiilka iskuxiran ee raadinaya khibrad qani ah oo dhammeystiran oo ay kujirto sida ugufiican ee madadaalada, khibradda sawirqaadka iyo awooda moobiilka ugu badan. The 4 kamaradood, 2 hore 24 Mp iyo 2Mp iyo 2 gadaal 16 Mp iyo 2 Mp, waxay dammaanad qaadayaan ku dhawaad ​​sawirro xirfadleyaal ah oo diyaar u ah inay ka tarjumaan xaqiiqda isla markaana kor u qaadaan faahfaahinta u oggolaanaya dadka isticmaala inay qabsadaan xilliyada qiirada badan. Bandhiga Huawei FullView 2.0 6.3 “waxay bixisaa khibrad gaar ah oo is dhexgalka ah, taas oo ay ugu mahadcelinayaan shaashadda FullHD 19.5: 6 iyo kala duwanaanta midabbada iyo muuqaalka kore waxay xaqiijineysaa mid ka mid ah bandhigyada muuqaal ee ugu wanaagsan ee khadka toosan ee Huawei.
Adduunyada xawliga ku sii kordheysa ee maanta oo taleefanka casriga ahi noqdo saaxiibka lama huraanka u ah nolol-maalmeedka, Huawei cusub P smart + awoodaa inuu raaciyo macaamiisha ilaa goor dambe oo habeenkii ah iyadoo ay ugu mahadsan tahay bateriga awooda 3340 MAH iyo processor-ka Kirin 710 leh Sirdoonka farsamada. Awoodda aaladda cusub ee Huawei ayaa sidoo kale lagu muujiyey isticmaalka qotodheer oo dheer, halkaas oo bandhigyadu ay yihiin kuwo joogto ah kana tarjumaya lana jaan qaadaya baahiyaha gaarka ah ee kala duwan ee isticmaale kasta.
HUAWEI P smart +, la 4GB oo RAM ah waa 64 GB oo ROM ah waxay u oggolaaneysaa macaamiisha inay lahaadaan dhammaan awooda ay ugu baahan yihiin inay ku shaqeeyaan codsiyada badan hal mar iyo meel bannaan oo lagu keydiyo sawirada oo la isku dayo barnaamijyo cusub iyo ciyaaro aan xad lahayn.
The P smart + Waxay ka kooban tahay dhammaan astaamaha lagama maarmaanka u ah inay noqdaan qalab dhammeystiran oo ay gaari karaan dhammaan macaamiisha, taasoo xaqiijineysa ballanqaadka Huawei ee ah inay bixiso had iyo jeer xalal hal abuur leh, oo loogu talagalay mustaqbalka teknolojiyadda oo loogu talagalay in lagu qanco rabitaanka isticmaaleyaasha.
Muusikada, sawir qaadista, riwaayadaha iyo madadaalada: kuwani waa dhinacyada ugu muhiimsan ee P smart + kaas oo lagu sheegi doono mashruuca wadada oo leh marti qaas ah: Emis Killa. Fannaanka ayaa xiddig ka noqon doona Socdaalka PsmartPlus, xaflad gaar ah oo loogu talagalay Huawei si ay uga yaabiso ugana qeyb galiso taageerayaasheeda agagaaraha magaalada Milan.
HUAWEI P Smart + mar horeba waa laga heli karaa horay-u-dalbashada maanta on Amazon.it midab madow qiimaha lagu taliyay ee tafaariiqda 299 Euro.